Airlines scramble for Zim’s runways - The Zimbabwe Independent
HomeBusiness DigestAirlines scramble for Zim’s runways
Airlines scramble for Zim’s runways
THE total number of airlines flying in and out of Zimbabwe are expected to reach 13 by November this year as more regional and international carriers scramble for Zimbabwe’s runways.
With the country’s national airline, Air Zimbabwe, struggling to recover from a myriad of operational problems, one of which is its US$150 million debt which continues to balloon, international airlines have seen an opportunity to grow their business in Zimbabwe.
Fresh Air, the Zimbabwe registered airline which recently entered into a joint venture (JV) agreement with South African low cost carrier, 1time Airline, is set to take to the skies on November 2, with its first flight departing OR Tambo International Airport en route to Victoria Falls Airport, Zimbabwe. South African Airways leads on frequency, with almost 20 flights, Kenya 11, South African Airlink 11, Emirates 5 and Namibia 4 flights per week.
In February, Sol Air was licensed to service the Harare– Kariba-Victoria Falls–Kariba- Harare route, the Victoria Falls –Buffalo Range-Victoria Falls route as well as the Harare-Beira, Harare-Maputo and Harare–Tete regional routes.
Sol Air financiers and advisors say the company faces collapse unless it secures lucrative domestic and regional routes, which are reserved for the struggling Air Zimbabwe.
Previous articleAgric production to drop sharply
Next articleTPH to dispose of loss making Puzey & Payne